Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Jet2 nyere iwu ụgbọ elu A15neo ọhụrụ 321
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
A ga -ahazi ụgbọ elu ọhụrụ maka oche 232 nwere ụlọ Airspace nke na -egosipụta ọkụ ọhụrụ, ngwaahịa oche ọhụrụ na 60 % nnukwu akpa igbe dị n'elu maka nchekwa agbakwunyere.
Iwu ọhụrụ na -ewe usoro mkpokọta nke Leeds, United Kingdom, ụgbọ elu dabere na 51 A321neos.
Iwu ụgbọ elu abụọ ahụ na -egosipụta mmụba nke ụgbọ mmiri Jet2.com na mmeghari nke atụmatụ ya.
A ga -ahazi ụgbọ elu ọhụrụ maka oche 232 nwere ụlọ Airspace nke na -egosipụta ọkụ ọhụrụ.
Jet2.com etinyela iwu ọzọ maka 15 A321neos na -eso nke mbụ ya maka 36 etinyere na Ọgọst 2021. Ọ na -ewe usoro mkpokọta site n'aka Leeds, United Kingdom, ụgbọ elu dabere na 51 A321neos. Iwu abụọ ahụ na -egosipụta Jet2.comMgbasa ụgbọ mmiri na -eme atụmatụ na atụmatụ mmeghari ohuru. A ga -eme nhọpụta injin n'oge ọzọ.
New Jet2.com A ga -ahazi ụgbọ elu maka oche 232 nwere ụlọ Airspace nke na -egosipụta ọkụ ọhụrụ, ngwaahịa oche ọhụrụ na 60 % nnukwu akpa igbe dị n'elu maka nchekwa agbakwunyere.
Ezinaụlọ A320neo na -etinye teknụzụ kachasị ọhụrụ, gụnyere injin ọgbọ ọhụrụ na Sharklets, na -ebubata mbelata pasent 20 n'otu oche. Site na mgbakwunye ọzọ ruru 500 nautical kilomita/900 km. ma ọ bụ tọn abụọ nke ụgwọ ọrụ ọzọ, A321neo ga -ebuga Jet2.com yana ikike ego ọzọ.
Na ngwụcha Ọgọst 2021, ezinụlọ A320neo emeriela ihe karịrị 7,500 iwu siri ike site n'aka ndị ahịa 120 n'ụwa niile.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Jet2.com Limited, nke a makwaara dị ka Jet2, bụ ụgbọ elu ezumike nka dị ọnụ ala nke Britain na-enye ụgbọ elu emebere na ụgbọ elu si United Kingdom. N'ihe banyere 2019, ọ bụ ụgbọ elu nke atọ kachasị ukwuu na UK, n'azụ EasyJet na British Airways.
Ezinaụlọ Airbus A320neo bụ mmepe nke ezinụlọ A320 nke ụgbọ elu wara wara nke Airbus mepụtara. Ezinaụlọ A320neo sitere na A319 gara aga, A320 na A321, nke akpọrọ A320ceo, maka "nhọrọ injin dị ugbu a".